आखिर के हो आईफोन पछाडिको यो कालो थोप्लाको काम ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
आखिर के हो आईफोन पछाडिको यो कालो थोप्लाको काम ?
काठमाडौं । यदि तपाईंसँग आईफोन १२ प्रो तथा प्रो म्याक्स अथवा आईफोन १३ प्रो तथा प्रो म्याक्स प्रयोग छ भने पक्कै पनि क्यामेरा एर्रेसँगै कालो थोप्लो रहेको कुरा त पक्कै पनि विचार गर्नु भएकै होला । यदि तपाईंले ख्याल गर्नु भएको छैन भने यहाँ माथिको तस्वीरमा आईफोन १३ प्रो म्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ ।
क्यामेरा एर्रे भित्रै रहेको हुँदा यसको काम के होला भन्ने अनुमान लगाउन तपाईँका लागि एउटा आधार चाहिँ हुनसक्छ । पक्कै पनि यो क्यामेरा नै हो । वास्तवमा यो स्क्यानर हो ।
लाइट डिटेक्सन र रिङ्गको लागि लिडार रहेको हुन्छ । यसबाट इन्फ्रारेड लाइट जल्छ र आफ्नो वरिपरिको थ्रीडी तस्वीरका लागि उक्त लाइट प्रयोग गर्छ । आईफोनले पोट्रेट मोड जस्तै क्यामेरा ट्रिक्सको लागि डेप्थ म्याप तयार पार्न लिडार स्क्यानर प्रयोग गर्छ ।
जसले अटोफोकसको स्पिड बढाउन समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । यति मात्र होइन, निश्चित एपअनुसार यसले थप धेरै काम पनि गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि थ्रीडी स्क्यानर एपलाई नै लिनुहोस् ।
यसले स्क्यान गर्न, थ्रीडी फाइल एडिट गर्न, अब्जेक्ट मापन गर्न र अरुसँग थ्रीडी फाइल शेयर गर्ने जस्ता काम गर्छ । लिडार स्क्यानरलाई उपयोग गर्ने अर्को एप क्यानभासः लिडार थ्रीडी मेजरमेन्ट पनि हो ।
यदि तपाईं आफ्नो घरलाई रिमोडेलिङ अथवा पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एपले मापनका लागि यसले तपाईंको थुप्रै समय जोगाइदिन सक्छ । प्रयोग गर्न सहज मात्र होइन, यसबाट नतिजा पनि गज्जबको निस्किन्छ ।
आगामी दिनमा एप्पलले एआर प्रविधिमा हात हालेपछि लिडार क्यामेराले थप काम गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तैपनि हालका लागि यस्ता थुप्रै एप छन्, जसले लिडार क्यामेरा प्रविधिको माध्यमबाट तपाईँका लागि थुप्रै नवीनतम् र आनन्ददायी सहजता दिन सक्छन् ।
आईफोन फोर्टिनमा पन्चहोल डिस्प्ले हुने
काठमाडौं । यती बेला आईफोन फोर्टिन निकै चर्चामा छ । एप्पलको आगामी प्रोडक्ट आईफोन फोर्टिन
‘आईफोन १५ प्रो’ मा सिमकार्ड स्लट नहुने
काठमाडौं । गत सेम्टेम्बरमा मात्र एप्पलले आईफोन १३ सिरिज सार्वजनिक गरेको थियो । अब कम्पनी
सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा सस्तो फोन सार्वजनिक गर्दै एप्पल
काठमाडौं । एप्पलले सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो सस्तो सिरिज ‘आईफोन एसई’ मा नयाँ
काठमाडौं । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण एप्पलको आईफोन तथा अन्य उत्पादन विश्वव्यापी चर्चित छ । यसमा